ဒဂုံတက္ကသိုလ်က အချောလေးတွေကို သွားကြည့်ပြီး ကျောင်းရောက်မှ ကျောင်းပိတ်လို့ ကြေကွဲသွားတဲ့ ငြိမ်းသော် - Zeekwat Hot News
ဒဂုံတက္ကသိုလ်က အချောလေးတွေကို သွားကြည့်ပြီး ကျောင်းရောက်မှ ကျောင်းပိတ်လို့ ကြေကွဲသွားတဲ့ ငြိမ်းသော်
September 9, 20190178
ကိုရီးယားမင်းသားလားလို့ အထင်မှားခံရတတ်ပြီး ည မင်းသားလို့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေကြားမှာ ထူးထူးခြားခြား ထင်ရှားနေတဲ့ မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင် ငြိမ်းသော်ကို ပရိသတ်ကြီး သိမယ်ထင်ပါတယ်။ သူကအခုနောက်ပိုင်း အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို သေချာအာရုံစိုက် လုပ်ကိုင်လာနေတာ တွေ့မြင်နေ ရပါတယ်။ ပွဲအခမ်းအနားတွေမှာလဲ သူကို မကြာခဏတွေ့မြင်နေရ ပါတယ်။
သူက ပုဆိုးလေးတွေနဲ့ တည်တည် ကြည်ကြည် တွေ့မြင်ရသလို လူငယ်တစ်ဦးလဲဖြစ် မော်ဒယ်တစ်ဦးလဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် အမိုက်စား Fashion တွေနဲ့လည်း တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ငြိမ်းသော်က မော်ဒယ်လောက ကနေ ဒါရိုက်တာ ထူးပိုင်ဇော်ဦး ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ “ည” ဇာတ်ကား ထဲ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကို ကူးပြောင်းခဲ့ပြီး အဲဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ သူ့ကိုပရိသတ်တွေ မှတ်မိစေခဲ့ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေက ညမင်းသားလို့တောင် ချစ်စနိုးနဲ့ နာမည်ပေးထားပါတယ်။ သူက သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ ဆိုရင် ကာရိုက်တာမျိုးစုံ ရိုက်ကူး ချင်တယ်လို့လဲ ပြောထားပါတယ်နော်။ ငြိမ်းသော်က 2014 ခုနှစ်မှာ အနုပညာလောကထဲကို ၀င်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူ့ဘ၀မှာ အခက် ခဲတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်လို့ သူကပြောခဲ့ပါတယ်။
အခုဆိုရင် ငြိမ်းသော်တစ်ယောက် သူရဲ့ ၀ါသနာကို ကြိုးစားမှုတွေကြောင့် ပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယခုဆိုရင် အနုပညာ အလုပ်တွေ ဆက်တိုက်လုပ် နေရပါတယ်။ သူဘ၀မှာ အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာတွေအပြင် သူ့ဘ၀ကို ကြိုးစားရင်ဆိုင် ကျော်ဖြတ် ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းသော်က မကြာမီ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်း တက္ကသိုလ်မှာ 💋SAI Tint Tint Lip Tattoo တစ်ရောင်ဆီကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ 👑Tint Tint Brand Ambassadors👑 လေးယောက်ကို SAI Cosmetix မှ 🧐စတင်ရှာဖွေတဲ့ ပွဲကို ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်။ နှုတ်ခမ်းနီမလေးေ တွ အသည်းစွဲ ငြိမ်းသော်က ယနေ့မှာ“ဒဂုံတက္ကသိုလ်က အချောလေးတွေကို လာကြည့်တာလေ ဟိုရောက်မှ ကျောင်းပိတ်တယ်တဲ့လား . 😬🥴😅😛” ဆိုပြီး ကျောင်းရောက်မှ ကျောင်းပိတ်လို့ ကြေကွဲစွာ ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ငြိမ်းသော်က ယနေ့မှာ ဒဂုံတက္ကသိုလ်မှာ ရိုက်ကူးရေးပြုလုပ်ဖို့ ရောက်ရှိတာဖြစ်ပြီး နှုတ်ခမ်းနီမလေး တွေကို စနောက်ထားတာဖြစ်ပါ တယ်။ အနုပညာရှင် တွေရဲ့ နေ့စဉ် လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်လေးတွေကို သိရှိခံစားနိုင်အောင်လို့ ဇီးကွက် Page လေးကို Like လုပ်ထားဖို့ ပြောခဲ့ပါရစေနော် .….……။
ဒဂုံတက်ကသိုလျက အခြောလေးတှကေို သှားကွညျ့ပွီး ကြောငျးရောကျမှ ကြောငျးပိတျလို့ ကွကှေဲသှားတဲ့ ငွိမျးသျော
ကိုရီးယားမငျးသားလားလို့ အထငျမှားခံရတတျပွီး ည မငျးသားလို့ နှုတျခမျးနီမလေးတှကွေားမှာ ထူးထူးခွားခွား ထငျရှားနတေဲ့ မျောဒယျ သရုပျဆောငျ ငွိမျးသျောကို ပရိသတျကွီး သိမယျထငျပါတယျ။ သူကအခုနောကျပိုငျး အနုပညာလုပျငနျးတှကေို သခြောအာရုံစိုကျလုပျကိုငျလာနတော တှမွေ့ငျနေ ရပါတယျ။ ပှဲအခမျးအနားတှမှောလဲ သူကို မကွာခဏတှမွေ့ငျနရေ ပါတယျ။ သူက ပုဆိုးလေးတှနေဲ့ တညျတညျ ကွညျကွညျ တှမွေ့ငျရသလို လူငယျတဈဦးလဲဖွဈ မျောဒယျတဈဦးလဲ ဖွဈတဲ့အတှကျ အမိုကျစား Fashion တှနေဲ့လညျး တှမွေ့ငျရပါတယျ။ ငွိမျးသျောက မျောဒယျလောက ကနေ ဒါရိုကျတာ ထူးပိုငျဇျောဦး ရိုကျကူးခဲ့တဲ့ “ည” ဇာတျကားထဲ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့ပွီး သရုပျဆောငျပိုငျးကို ကူးပွောငျးခဲ့ပွီး အဲဒီရုပျရှငျဇာတျကားမှာ သူ့ကိုပရိသတျတှေ မှတျမိစခေဲ့ပါတယျ။ ပရိသတျတှကေ ညမငျးသားလို့တောငျ ခဈြစနိုးနဲ့ နာမညျပေးထားပါတယျ။ သူက သရုပျဆောငျပိုငျးမှာ ဆိုရငျ ကာရိုကျတာမြိုးစုံ ရိုကျကူးခငျြတယျလို့လဲ ပွောထားပါတယျနျော။ ငွိမျးသျောက 2014 ခုနှဈမှာ အနုပညာလောကထဲကို ဝငျရောကျခဲ့တာဖွဈပွီး သူ့ဘဝမှာ အခကျခဲတှေ ရှိခဲ့ပါတယျလို့ သူကပွောခဲ့ပါတယျ။ အခုဆိုရငျ ငွိမျးသျောတဈယောကျ သူရဲ့ ဝါသနာကို ကွိုးစားမှုတှကွေောငျ့ ပရိသတျရဲ့အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့တာဖွဈပွီး ယခုဆိုရငျ အနုပညာအလုပျတှေ ဆကျတိုကျလုပျ နရေပါတယျ။ သူဘဝမှာ အခကျအခဲတှရေငျဆိုငျခဲ့ရတာတှအေပွငျ သူ့ဘဝကို ကွိုးစားရငျဆိုငျ ကြျောဖွတျခဲ့ရသူဖွဈပါတယျ။ ငွိမျးသျောက မကွာမီ ရနျကုနျအရှပေို့ငျး တက်ကသိုလျမှာ 💋SAI Tint Tint Lip Tattoo တဈရောငျဆီကို ကိုယျစားပွုတဲ့ 👑Tint Tint Brand Ambassadors👑 လေးယောကျကို SAI Cosmetix မှ 🧐စတငျရှာဖှတေဲ့ ပှဲကို ကငျြးပခဲ့တာဖွဈပါတယျနျော။ နှုတျခမျးနီမလေးတှေ အသညျးစှဲ ငွိမျးသျောက night party တဈခုကိုသှားတာတှရေ့ပွီး “ဒဂုံတက်ကသိုလျက အခြောလေးတှကေို လာကွညျ့တာလေ ဟိုရောကျမှ ကြောငျးပိတျတယျတဲ့လား . 😬🥴😅😛” ဆိုပွီး ကြောငျးရောကျမှ ကြောငျးပိတျလို့ ကွကှေဲစှာ ပွောထားတာတှရေ့ပါတယျ။ ငွိမျးသျောက ယနမှေ့ာ ဒဂုံတက်ကသိုလျမှာ ရိုကျကူးရေးပွုလုပျဖို့ ရောကျရှိတာဖွဈပွီး နှုတျခမျးနီမလေး တှကေို စနောကျထားတာဖွဈပါတယျ။ အနုပညာရှငျ တှရေဲ့ နစေ့ဉျ လှုပျရှားမှု ပုံရိပျလေးတှကေို သိရှိခံစားနိုငျအောငျလို့ ဇီးကှကျ Page လေးကို Like လုပျထားဖို့ ပွောခဲ့ပါရစနေျော .….……။
ပင်လယ်စာအစိမ်းကိုမှ မက်မက်မောမောစားပါများလို့ အသည်းမှာ သံတွယ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားအကြောင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်…..
မော်လ်ဒိုက်ရဲ့ ရှုခင်းအမိုက်စားတွေနဲ့အပြိုင် စမတ်ကျခန့်ငြားနေတဲ့ ပိုင်တံခွန်